I-Huawei Yonwabele i-9s kunye neNwabele i-9e: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa | I-Androidsis
I-Huawei ilungiselela ukuhambisa i-P30 yayo ephezulu eParis, Kumsitho oza kuqala kwiiyure ezimbalwa. Nangona uphawu lwaseTshayina lungachithi xesha kwaye lusishiya nezinye iimodeli. Kule meko, inkampani iveza iifowuni ezimbini phakathi kuluhlu oluphakathi. Imalunga neHuawei Yonwabela i-9 kwaye Yonwabele i-9e. Iimodeli ezimbini esele sinazo ukuvuza okuthile kule veki iphelileyo, njengokuba sele sikuxelele.
Ekugqibeleni, Ezi zintsha zeHuawei ziyonwabele i-9s kunye neNwabele i-9e sele zinikezelwe ngokusemthethweni. Iimodeli ezimbini ezintsha apho uphawu lwaseTshayina lufuna ukomeleza uluhlu lwalo lwalo nyaka. Nangona beyimodeli enezinto ezifanayo nezinye iifowuni esele inikwe yinkampani ngokwayo.
Kwakhona, Kubonakala ngathi ezi modeli zimbini zintsha zomenzi waseTshayina ziya kuba zezentengiso yaseTshayina kuphela. Bakhumbula ikakhulu kwi-P Smart + ukuba uphawu luye lwaziswa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kweli candelo linye. Ke beza noyilo lwangoku, ukongeza kwinkcazo elungileyo. Sikuxelela ngakumbi malunga nezi modeli zimbini zingezantsi.
1 Ukucaciswa kweHuawei Yonwabele i-9 kunye nee-9e
Iindidi I-Huawei Yonwabele i-9 kwaye Yonwabele i-9e
Sibeka itafile apho ungayibona inkcazo yala malungu mabini matsha ukusuka kuluhlu oluphakathi lomenzi waseTshayina. Ezi modeli zimbini zahluke kakhulu ngokubanzi, nangona zombini zifikelela kolu luhlu luphakathi. Ngelixa iHuawei Yonwabele i-9S isungulwe kwicandelo eliphezulu, ngakumbi kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu, kunye nenye imodeli, i-Enjoy 9E ifikelela kwinqanaba eliphakathi eliphakathi lomenzi waseTshayina.
HUAWEI KONWABELE 9S
HUAWEI YONWABELE 9E
ISIKHUMBUZO I-6,21-intshi ye-LCD ene-19,5: 9 ratio kunye nesisombululo se-FullHD + (2.340 x 1.080 pixels) I-6,09-intshi ye-LCD ene-19: 9 ratio kunye ne-HD + resolution (1.520 × 720 pixels)
INKQUBO Kirin 710 Helio P35
i-RAM 4 GB 3 GB
UKUGCINWA KWANGAPHAKATHI I-64/128 GB (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD) I-64 GB (iyandiswa ngekhadi le-MicroSD)
IKHAMERA EMVA 24MP + 16MP + 2MP 13MP nge f / 1.8 ukuvula
IKHAMERA ENGAPHAMBILI 8MP nge f / 2.0 ukuvula 8MP nge f / 2.0 ukuvula
INKQUBO YOKWENZA Ipie ye-Android 9.0 ene-EMUI 9.0 Ipie ye-Android 9.0 ene-EMUI 9.0
IBATTERI 3.400 mah 3.200 mah
UQHAGAMSHELWANO I-WiFi, i-microUSB, i-headphone jack, i-GPS, i-GLONASS, i-LTE / 4G I-WiFi, i-microUSB, i-headphone jack, i-GPS, i-GLONASS, i-4G / LTE
ABANYE Umfundi weFingerprint Umfundi weFingerprint
Eyokuqala yeemodeli ezimbini ngokungathandabuzekiyo inamandla kakhulu, ngenxa yobukho bekhamera ngasemva kathathu, ngokungathandabuzekiyo eya kuba yinto eya kuthi ibangele umdla omkhulu kubathengi kwimarike. Ke kuyimodeli ukuba ithathele ingqalelo kule meko yabathengi. Yintoni egqithisile, Isebenzisa iKirin 710 ngaphakathi, yeyiphi iprosesa yohlobo lwentengiso yaseTshayina kweli candelo lobungakanani bephakathi lweprimiyamu.
Ngelixa iHuawei Yonwabele i-9E yimodeli elula kakhulu. Inxalenye yefowuni enokuthi ikhumbuze ezinye ze-Y6 Pro 2019 eboniswe kwithuba elidlulileyo, kokubini kuyilo kunye nokubalulwa, siyabona ukuba ezi zixhobo zimbini zinemiba efanayo kuloo ngqondo. Kodwa ithiwe thaca njengenye imodeli eyamkelekileyo kuluhlu oluphakathi. Nangona ukhetho lweprosesa yinto abaninzi abangazukuyigqiba ekholisayo.
Kwimeko ye-Huawei Yonwabela i-93, kuya kufuneka silinde de kube ngu-Epreli 8 ukuze isungulwe kwintengiso e-China. Yenza njalo kuhlobo olunye olune-3 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina. Isungulwe ngexabiso le-999 yuan (I-130 zeerandi zokutshintsha). Kule meko, ikwaziswa ngemibala eliqela, omnye wawo inguquko yesikhumba eyenziweyo.
Kwelinye icala sinayo I-Huawei Yonwabela i-9S, esungulwe ngexabiso le-1.499 yuan (Ii-euro ezingama-197 zokutshintsha) kuhlobo lwayo lwexabiso eliphantsi. Kuya kubakho iinguqulelo ezimbini, zombini ezine-4 GB ye-RAM, kodwa ukugcinwa kuyahluka ukusuka kuma-64 ukuya kuma-128 GB kuxhomekeke kwinguqulelo leyo. Ifowuni iphehlelelwe ngemibala emithathu eyahlukeneyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Huawei Yonwabela i-9s kunye neNwabele i-9e: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha lophawu lwaseTshayina
I-Samsung Galaxy Note FE ifumana uhlaziyo kwiPie ye-Android